Beereyaal iyo daryeel | January 2020
Isticmaalka daroogada "Amprolium" ee daawada xoolaha: tilmaamaha isticmaalka
Ugu Weyn Ee Beereyaal iyo daryeel
Sirqaraha beeritaanka iyo daryeesha xayawaanka
Sida geed kasta oo beertii ah, tubta ayaa leh waqtigeeda iyo shuruudaha beerashada. Aad bay muhiim u tahay in la tixgeliyo, sababtoo ah khaladaadka ugu yar wuxuu kaa saari karaa geedka laftiisa iyo goosashada dheer ee la sugayey. Qodobkani waxaan ku sharxeynaa dhammaan sifooyinka iyo qorshooyinka abuurka tubta, wuxuu kuu sheegi doonaa sida loo doorto meesha saxda ah ee loogu talagalay iyo daryeesha muddada koritaanka oo dhan.
Mararka qaar, cunida miro aad u fiican, waxaa jira rabitaan ah in la isku dayo lafo si aad u hesho geed miro cusub. Kulamadu badanaa waxay qabaan su'aalo ku saabsan in aad ku kori kartid dabayl ama dhaqame kale oo midab leh oo dhagax ah guriga. Tani waa la samayn karaa, laakiin waa arrin adag, sababtoo ah ka hor intaan laga beerto dhagax, waa lagama maarmaan in la diyaariyo.
Waa maxay xayawaanka Hungarianka iyo sida loo koro meeshan
Wadar ahaan adduunka waxaa jira 30 noocyo waaweyn oo geedo ah. Intooda badani waxaa lagu sii darayaa laanahooda u gaarka ah - siyaabo kala duwan oo loo yaqaan 'breeders'. Maaddada maanta waxan ka hadli doonnaa noocan oo kale ah oo ah dalal Hungarian ah. Astaamaha iyo sifooyinka suurtagalka ah ee ah Hungarian Hungarian waa noocyo kala duwan oo guryo xannaano ah.
Noocyada sii kordhaya ee Dalaga Shiidan: beeritaanka iyo daryeelka
Roobka Shiinaha ayaa si dhif ah u koray beerahayaga, laakiin weli waxaa jira dad xiiso leh oo isku dayaya inay rogrogaan. Ka dib oo dhan, waxay mar walba raalli ka midho leh casiir leh oo casiir leh, siinayaa ubax qurux badan oo jilicsan, hore u fruiting. Intaa waxaa dheer, noocyada of plomas kuwaasi si fudud u la qabsan karaan shuruudaha juqraafi ahaan, waa kuwo adag, adkaysi u ah cudurrada iyo cayayaanka.
Noocyada caanka ah ee laga bilaabo xayawaanka Hungarian
Plum Hungarian wuxuu noqday kuwa ugu jecel beeraleyda. Noocyada ayaa isku midka ah midabka kale ee midabka madow ee miro, oo ah taabasho sigaar ah, iyo daboolka reer Hungarian wuxuu u eg yahay qaab ukun ah. Kaliya laga bilaabo plomme of noocyo Hungarian u sameeyaan finaha, maadaama ay ku jiraan badan oo pectin, sonkorta iyo walax qalalan. Qodobka waxaa loo isticmaalaa karinta iyo cunid cusub.
Cuntada qurxinta ee cajiibka ah - tufaaxa: raashinka tallaabo tallaabo ah ee suugada delicious
Waa maxay boqoshaada koray gobolka Kaliningrad
Canab - geed geedo ah oo aad u qurux badan oo ka mid ah qaybta beerta. Ma jiraan waxyaabo badan oo lagu magacaabo "beerta canabka ah", sababtoo ah sida baadiyaha ah, haddii uusan beerta beerta, ka dibna ku dhowaadba. Si dhirta, marka lagu daro quruxda, si ay u keento goosashada wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in si haboon loo daryeelo oo si joogto ah u fuliso nidaamyo dhowr ah, mid ka mid ah taas oo ah in laga saaro kore. Read More
Geedka Rinkenka ee xaaladaha gudaha iyo daryeelka iyaga
Geedka Jones Sophora: Guryaha daawada iyo codsiga
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beereyaal iyo daryeel 2020